यो कस्तो अचम्म ! १६ वर्षे युवतीको पेटमा १२ वर्षे बालकको गर्भ – पुरा पढ्नुहोस्……
एजेन्सी । पत्याउन गाह्रो तर सत्य घटना घटेको छ । भारतको मध्य प्रदेशको सोनवर्षा गाउँमा एक जना १६ वर्षकी युवतीको पेटमा १२ वर्षे बच्चमको गर्भ रहेको बताइएको छ ।
यही विषयलाई लिएर उक्त केटीले सोहागी प्रहरी थानामा उजुरी दिएकी छन् । उनका अनुसार आफू एक जना गाउँलेको घरमा खाना खान गएको थिए । तर रात परेपछि उतै सुतेकी बताएकी छन् ।
विहान उठ्दा आफुसँग १२ वर्षे केटा सुतीरहेका थिए । उनले आफूलाई त्यस १२ वर्षे केटाले बलात्कार गरेको दाबी गरेकी छन् ।
तर उनले राती आफहरुबीच यौन सम्बन्ध भएको भन्ने कुरा भने गोप्य राखेकी छन् । उनले प्रहरी चौकीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले १२ वर्षे केटाको मेडिकल रिपोर्ट चेक गरेको छ । रिपोर्टमा उक्त १२ वर्षे केटाको नभएको जनाइएको छ ।
तर ती गर्भवति महिलाले भने त्यही १२ वर्षे केटा गर्भ रहेको दाबी गरिहेकी छन् । उनको दाबीपछि गाउँमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । प्रहरी पनि अलमलमा परेको छ । अब कसरी यो मुद्दालाइ जाँच गर्ने भनेर विज्ञहरुसँग सल्लाह लिइरहेको बताइएको छ ।
काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता प्रक्रियाले निरन्तरता पाउन थालेको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक पछि गठित कार्यदलले समेत प्रतिवेदन तयार पार्ने कामलाई तीब्रता दिएको छ ।
बाम गठबन्धन फुटाउने सपना नदेख्न एमालेका नेताहरुले चेतावनी समेत दिन थालेका छन् । एमालेका नेताहरुले बाम गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र पूरा नहुने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले जतिसुकै षडयन्त्रका वावजुत वाम गठवन्धन नतोडिने दावी गर्नुभएको छ ।
सरकारको आलोचनामा समय खर्चिनु भएका नेता नेम्वाङले बाम गठबन्धन तुहाउनकै लागि सरकारको आयु लम्ब्याइएको आरोप लगाउनुभयो ।
आफूहरु जनमतबाट नभाग्ने स्पष्ट पार्दै अबको सरकार बाम गठबन्धनकै हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो । पार्टी एकता र सरकार गठन प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउने नेता नेम्वाङको भनाई थियो ।
कार्यदलमा रहेका नेता नेम्वाङले राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार गठनका विषयमा खाका तयार पार्न छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकेर राजनीतिक संकटको अन्त्य गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सरकारले राजनीतिक सहमतिका लागि भन्दै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न ढिलाई गर्दै आएको छ । न्युज २४ नेपाल बाट
Prevपढ्दा पढ्दै आशु झर्यो..प्रेम गर्नेहरुले पढ्नैपर्ने कुरा
Nextअस्पतालमै पुगेर श्वेता खड्काले जलजला परियारलाई गरिन् लाखौको सहयोग ! हेर्नुहोस् भिडियो
नेपालमा बन्यो बलिउड म्युजिक भिडियो , नेपालि मोडल रिस्ताको अभिनय -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
दुईटै हात गुमाएकी १६ बर्षकी रुपा, खट्टाले खान्छिन्, लेख्छिन्, मोबाईल चलाउँछिन् अन्जु पन्तलाई टक्कर दिने आवाज (भिडियो सहित)
भाइ*रल ११ बर्षीय कमला घिमिरेलाई एलिजाले दिईन यतिधेरै पै*सा! कमलाको दोहोरी सुनेर रो*ए धमला- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
“ए हैजा, नर्क तिर लैजा”, पशुपतिको अर्को गीत फेरि भाइरल ! (भिडियो हेरी शेयर गरौ !)